दलालले समस्यामा पार्यो, म के गरुँ ?
Fri, Aug 07, 2020 | 00:58:17 NST
सर्मे सदा / जम्दह गाविस, सिरहा
प्रश्न : मैले एकजना दलाललाई गएको भदौमा विदेश जानका लागि पासपोर्ट दिएको थिएँ । दलालले अहिले १ लाख १५ हजार मागिरहेको छ । मैले सुनेको १५ हजार रुपैयाँ भन्दा धेरै तिर्नुपर्दैन । म समस्यामा परें । म के गरुँ ?
उत्तर : गोविन्द मणी भुर्तेल, प्रवक्ता, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय - जानी जानी आफ्नो पासर्पोट जस्तो कुरा, घरको सम्पती जस्तो कुरा दलाललाई दिनु भएन । यो तपाईंको गल्ती हो । तपाईंले पासर्पोट र्फीता लीन नजीकको प्रहरी वा जील्ला प्रसासन कार्यालयमा उजुरी गर्नुहोस् । तपाईंको पासर्पोट फीर्ता हुन्छ । दलाले मागे अनुसार रकम नबुजाउनु होला । न्युनतम लागत कार्यान्वयन भइकेको अवस्था छ । तपाईं वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक भए बिज्ञापन हरेर आधिकारीक माध्यम बाट मात्र जानु होला ।